ILAM KHABARमाक्स किन गोजीमा?जोखीम बड्यो अभियान सँगसँगै कार्बाही पनी बडाईन्छःप्रहरी निरिक्षक लिम्बु - ILAM KHABAR
माक्स किन गोजीमा?जोखीम बड्यो अभियान सँगसँगै कार्बाही पनी बडाईन्छःप्रहरी निरिक्षक लिम्बु
२०७७ मंसिर २२,
मनोज अधिकारी,फिक्कलःकोरोना संक्रमणको दर जती बड्दै गएको छ,मानिसहरु उतीनै लापारवाही बन्न थालेका छन् । नेपालीहरुको महान चाढ तिहार यता इलाम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा संक्रमित तिव्र गतिमा फैलिरहेका छन । तथापी मानिसहरु भने मास्क लगाउन झन्जट मान्छन् । प्रहरी र जनप्रतिनिधी देखेर मुख छोपे झैँ जस्तो गर्दा महामारी बाट बच्न नसकिएला की?
सोमबार नेपाल प्रहरीको आयोजना र सूर्योदय नगरपालिका वडा नं १० को समन्वयमा फिक्कल बजारमा शान्तिपुर्ण र्यालि सम्पन्न भएको छ । फिक्कल चोक बजारबाट प्रारम्भ भएको र्यालि नगरपालिका हुँदै बजार परिक्रमा गरेर चोकमा समापन गरियो । सहभागिले कृपया माक्स लगाउनु्होस्, माक्स किन गोजीमा?,हिजो सम्म माक्स लगाउनुभयो । आज खोई? लगायतको नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । सूर्योदय १० नं वडाका अध्यक्ष पेमा उगेन लामा,वडासदस्य विमल कार्की,इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका पहरी निरिक्षक दिलप्रसाद लिम्बु,फिक्कल प्रहरी चौकीका प्रमुख लगायत नेपाल प्रहरी,नगर पहरी,जनप्रतिनिधी तथा संचारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो । यस अवधिमा अधिकांश मानिस बिना माक्स यात्रा गरिरहेका थिए भने ब्यापार गरिरहेकाहरुको अनुहारमा पनी माक्स थिएन । कतिपय त प्रहरीको ताँती देखेपछि हत्त न पत्त गोजीबाट माक्स निकाल्दै थिए त कोही घरभित्र पस्दै थिए ।
चेतना भएर पनि मानिसहरुले कोरोनालाई बेवास्था गरेको पाईएपछि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सचेतना जगाउन शान्तिपुर्ण एवं सुरक्षित समाजका लागी र्यालि गरिएको इलाका प्रहरी कार्यलय पशुपतिनगरका प्रहरी निरिक्षक देउप्रसाद लिम्बुले बताउनुभएको छ । “हर प्रहर, गाउँ र नगरी टोल टोलमा नेपाल प्रहरी”, भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम गरिएको लिम्बुको भनाई छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा यस अघिपनि प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र अब हरेक साप्ताहीक तथा मासिक रुपमा यस खालका कार्यक्रम गरिदै जाने उहाँले बताउनु भयो । सचेतनाका कार्यक्रम तल्लो स्तर सम्म पुगेको र सबै नागरीक सुरक्षाका बिषयमा जानकार भएपनि कतिपय मानिस आफँै असुरक्षित बन्ने प्रवृत्तिले अझ संक्रमणको जोखीम बढाएको उहाँको तर्क छ । ब्यक्ति,परिवार र समाज सचेत भएमात्र मुलुक सुरक्षित हुने भएकाले अभियान संगसंगै नियम उल्लङ्गन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजीम कार्बाही प्रकृया अघि बढाईने पनि बताईएको छ ।
वडा नं १० का अध्यक्ष लामाले कोरोनाबाट सुरक्षित बस्न तर नआत्ताल्लिन आग्रह गर्नुभएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्न सबैले माक्स र सेनिटाईजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न उहाँले अपिल गनभयो । पछिल्लो समय सूर्योदय नगरपालिकाका कर्मचारी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्क्लका कर्मचारी सहित स्थानीयमा समेत कोरोना संक्रमण देखिदै आएको छ । यस बेला यात्रागर्ने जो कोहीले स्वास्थ्य संवेदनशिलतामा ध्यान दिन लामाको अनुरोध छ ।
झण्डै एक वर्षअघि, सन् २०१९ को डिसेम्बरमा, चीनको बुहानलाई मुहान बनाएर तरङ्गित कोरोना भाइरसले संसारलाई कोभिड उपहार दियो । यो कोभिड दुनियाँको लागि महापीडक त भएकै छ, साथै पीडितलाई समाजले हेर्ने गलत दृष्टि र नकरात्मक टिप्पणीले भने थप दुःखित बनाएको पनि छ।रोग सबैलाई लाग्न सक्छ । निको भएपछि ऊ सामान्य जीवनमा फर्किन्छ । तर एकपटक संक्रमित ब्यक्ति सदावहार समाजबाट घृडित हुनु परेको उदाहरण पनि छन् । यस्ता खराब मानसिकता भने अन्त्य हुन जरुरी छ ।